Nandray ambasadoro vaovao telo ny filoha Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha. Anisan’izany ny avy any Niger, amin’ny alalan’i Mayaki Rakiatou, ny ambasadaoron’i Israely, ny Dr Eli Ben-Tura ary ny avy Italia, Pietro Giovanni Donnici. Samy nanolotra ny taratasy manendry azy ho masoivohon’ireo firenena ireo avokoa izy ireo ary naneho fahavononana hiara-kiasa amintsika.
Nivoitra tamin’ny dinika nifanaovan’ny filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean-Eric sy ny iraky ny Vondrona afrikanina, Lakhdar Brahimi, omaly tetsy Ambohidahy, ny fankasitrahan’ny vahiny ny andraikitra noraisin’ity andrimpanjakana ity tamin’ny taon-dasa. « Mendrika ny fanapahan-kevitrareo amin’ireny fikasan’ny depiote, hanongana ny filoham-pirenena ireny ka nitondrana vahaolana amin’ny alalan’ny fifanarahana andraikitra… Mba tsy hiverenan’ny krizy eto intsony », hoy izy.
Niompana amin’ny fandraisana anjarantsika amin’ireo fivoriana samihafa atao any ivelany, ankoatra ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony, ny filankevitry ny minisitra, omaly teny Iavoloha. Anisan’izany ny fihaonana an-tampony efa fanao momba ny « Powering Africa Summit » hatao ny faran’ny febroary izao any Washington. Eo koa ny fihaonana an-tampon’ny Vondrona afrikanina hanomboka ny 25 hatramin’ny 31 janoary izao any Addis-Abeba.